Akademiam-pirenen’ny Fitsaboana: “Tsy fanafody ary malalaka amin’ny tambavy CVO ny tsirairay” - ewa.mg
News - Santé - Akademiam-pirenen’ny Fitsaboana: “Tsy fanafody ary malalaka amin’ny tambavy CVO ny tsirairay”
Ho fisorohana ny ahiahin’ny rehetra mikasika fampiasana ny Covid Organics, nihaona tamin’ny filoha ny mpikambana aona amin’ny Akademiam-pirenen’ny fitsaboana (Anamem). Nivoitra tamin’izany ny famelana malalaka ny fampiasana ity tambavy ity eto amin’ny Nosy.
Nihaona tamin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireo mpikambana ao anatin’ny Académie Nationale de Médecine de Madagascar (Anamem), ny alarobia teo. Niaraka tamin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny filoha nandray azy ireo. Tanjon’ny fihaonana ny hanala ny ahiahin’ireo ekipa siantifika sy mpikaroka manoloana ity tambavy novokarina entina hamongorana ny valanaretina covid-19 ity.
“Tsy fanafody fa fitsaboana nentim-paharazana nohatsaraina ity Covid-Organics ity. Mamela safidy malalaka ny tsirairay amin’ny fisotroana azy sy ny fanajana tsara ny fatra voalaza ao amin’ny tavoahangy, indrindra ho an’ny ankizy izahay”, hoy ny Anamem.
Mahatsapa ny soa entin’ny raokandro malagasy ny Anamem. Na izany aza, manentana izy ireo mba hisian’ny rafitra fanaraha-maso ny fahasalaman’ireo olona nisafidy ny hisotro ny tambavy Covid Organics.
Nanambara ny Anamem fa manohana ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fikarohana vahaolana hiadiana amin’ny valanaretina covid-19. Manohana ny ezaka ataon’ny mpikaroka siantifika malagasy ihany koa izy ireo.
Nanamafy ity fanambaran’ny Anamem ity ny holafitry ny mpitsabo, tarihin’ny dokotera Andrianasolo Eric. Lalàna hafa no mifehy ny fitsaboana nentim-paharazana sy ity tambavy Covid Organics ity fa tsy toy ny fanafody mahazatra.
L’article Akademiam-pirenen’ny Fitsaboana: “Tsy fanafody ary malalaka amin’ny tambavy CVO ny tsirairay” a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 25/04/2020
Coronavirus - Covid-Organics - COVID19
RN1: nanao fanentanana aroloza ny zandarimaria Itasy
Nanao hetsika momba ny fanentanana aroloza teny amin’ny RN1 ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Itasy sy ny vondron-tobim-paritra Arivonimamo ary ny tobim-paritra misahana ny fifamoivoizana, ny asabotsy teo.Nitarika ity hetsika ity ny kaomandin’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Itasy, ny Lieutenat-Colonel Andriamijoro Jean Charles sy ireo mpiara-miasa aminy. “Anisan’ny be mpampiasa ny RN1 ary saika hitrangana loza matetika ka tsy maintsy natao izao hetsika izao mba hisorohana ny loza mety hitranga , indrindra amin’izao fotoana hahatongavan’ny fialan-tsasatra izao. Eo koa ny fisian’ireo toeram-pitsangantsanganana maro ao amin’ny faritra Itasy. Tanjona , ny hisorohana ny lozam-pifamoivoizana”, hoy ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity. Nisy, araka izany, ny fanentanana ny mpamily mba hifehy ny fifamoivoizana sy hanaja ny hafainganam-pandeha voafetran’ny lalàna. Nentanina toy izany koa ireo mpitondra moto mba hanao aroloha, indrindra ho an’ireo andian-jatovo mitondra mihazo iny lalana iny rehefa faran’ny herinandro. “Mampahatsiahy hatrany izahay fa lahy tokana ny aina ary mitaky ireo mpitondra fiara sy mampiasa lalana mba hanaraka ny toromarika omen’ny zandarimaria”, hoy izy. Nentanin’ny zandary koa ireo mpandeha rehetra hitondra kara-panondrom-pirenena mba tsy hisian’ny fahasahiranana rehefa misy ny fisavana ataon’ny zandary. Nozaraina takelaka mirakitra ireo tsara ho fantatra mandritra ny fampiasana ny lalana ny mpamily fiara sy ny mpitondra moto.Jean ClaudeL’article RN1: nanao fanentanana aroloza ny zandarimaria Itasy a été récupéré chez Newsmada.
Zavakanto sy serasera: nodimandry i Sammy, ao amin’ny Lôlô sy ny tariny
Nanjombona vao maraina ny tontolon’ny zavakanto, omaly… Niparitaka ny feo fa nodimandry i Sammy, iray amin’ireo Lôlô sy ny tariny. Samy tsy nisy te hino, saingy fotoana fohy taorian’izay, nanamafy ny vaovao ratsy ny fianakaviana: nodimandry i Sammy Rabenirainy… Niady tamin’ny aretina izy, saingy nilofika teo anatrehany ka lavo teny amin’ny hopitaly Anosiala. Noho ny fepetra mipetraka amin’izao fotoana, tsy maintsy notontosaina omaly ihany ny fandevenana. Olon’ny zavakanto amin’ny maha mpanakanto mpihira sy mpitendry azy i Sammy. Izy ilay tsy miteny firy ao amin’ny Lôlô sy ny tariny. Maka zorony hatrany izy sy ny lokangany, kanefa dia tsy manaingo fotsiny fa mitondra fiavahana amin’ireo hiran’ny tarika mihitsy. “Olona mahay zavatra kanefa tsy matikambo…olona tiana sady tia”, hoy ny filazan’i Dina Rakotomanga, izay iray amin’ireo mpikambana ao amin’ny Lôlô sy ny tariny. Tsy mpihira sy mpitendry ihany fa indrindra koa, teknisianina momba ny feo sy ny fandraisam-peo i Sammy. Maro ireo hira nandalo fandrindrana tao aminy. Anisan’ny angady nanana ireo horonam-peo “Hobio” niaraka tamin’ireo rahalahiny koa izy. Olon’ny serasera ihany koa anefa Rabenirina Samuelson Daniel. Mpampianatra sy mpampiofana mahakasika ny onjampeo izy ary nanam-pahaizana manokana amin’izany. Maro ireo teknisianina sy mpanao gazety amin’ny onjampeo novolavolainy, izay manana ny toerany avokoa, ary manerana ny Nosy izany. Ankoatra izay, efa talen’ny kabinetran’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Ralaindimby Tsilavina izy. Nitana andraikitra ambony maro tao amin’io minisitera io foana ihany koa. Efa filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Omda ihany koa izy. Niraradraraka ny fanehoana alahelo sy ny fanomezam-boninahitra an’ity mpanakanto, mpampianatra mpitari-dalana tsy mba tia nisehoseho ity. Araka ny fandaharam-potoana avy amin’ny fianakaviana, hisy ny fanompoam-pivavahana hotanterahina ao amin’ny Université Masca Sabotsy Namehana, ny asabotsy 27 marsa izao, manomboka amin’ny 9 ora maraina. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana, ny Lôlô sy ny tariny, ireo mpiserasera amin’ny haino aman-jery sy ny tapaka sy naman’i Sammy Rabenirainy izahay eto amin’ny gazety Taratra.Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Zavakanto sy serasera: nodimandry i Sammy, ao amin’ny Lôlô sy ny tariny a été récupéré chez Newsmada.
Artec: tranonkala ho an’ny mpanjifa
Nanokatra tranonkala site web, « Espace consommateur », ny Antokon-draharaha mandrindra ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra (Artec). Azon’ny rehetra idirana ny adiresy http://www.artec.mg/consommateur.php. Hanampy ny mpanjifa mampiasa ny tolotra samihafa amin’ny fifandraisan-davitra ity tranonkala ity, toy ny mpampiasa « internet », ny finday sy ny telefaonina. Toraka izany koa ho an’ny mpandraharaha sy ny orinasa amin’ny fifandraisan-davitra, ahazoam-baovao, torolalana, azo hakana ny taratasy hofenoina raha misy fitarainana, sns. Ho hita ao koa ny dingana arahina raha sendra misy finday very.Hisy fanentanana isan-karazany manodidina ny fifandraisan-davitra ao amin’it tranonkala ity. Toy ny fomba fampiasana ny finday miaraka amin’ny Imei, ohatra. Eo koa, ny tsara hamantaran’ny mpanjifa ny fepetra samihafa mialoha ny hanaovana sonia amin’ny fividianana tolotra. Maro zavatra tsy mazava loatra amin’ny mpanjifa nefa tsy tokony hatao ambanin-javatra.Njaka A.L’article Artec: tranonkala ho an’ny mpanjifa a été récupéré chez Newsmada.